Tourette Syndrome (အကြောလိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Tourette Syndrome (အကြောလိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Tourette’s Syndrome သည် ထိမ်းချုပ်ရခက်သော မလိုလားအပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ အသံများဖြစ်လာသည့် ရောဂါဖြစ်သည်။ ဥပမာ ထပ်ကာထပ်ကာ မျက်တောင်ခပ်ခြင်း၊ ပခုံးတွန့်ခြင်း၊ မပီမသအသံများထွက်ခြင်း၊ ဆဲရေးခြင်း။
ကုသမှုခံယူခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်မချင်း လူနာများသည် ကုသမှုကို မလိုကြပါ။
Tourette Syndrome (အကြောလိုက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ယောကျာ်းလေးများတွင် မိန်းကလေးများထက်ပို အဖြစ်များသည်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်မားစေသော အကြောင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ ထပ်မံသိရှိလိုသည်များကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Tourette Syndrome (အကြောလိုက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဓိကအားဖြင့် အကြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့လက္ခဏာများသည် မပြင်းထန်သောကြောင့် သိပင်မသိသာပါ။ အချို့မှာ မကြာခဏဖြစ်ပြီး သိသာသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ နေမကောင်းခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းတို့ဖြစ်လျှင် ပိုသိသာသည်။ ပိုပြင်းထန်သော လက္ခဏာများသည် အရှက်ရစေပြီး လူမှုဘဝနှင့် အလုပ်ကိုထိခိုက်စေသည်။ အကြောလိုက်ခြင်း နှစ်မျိုးရှိသည်။
လက် သို့မဟုတ် ခေါင်းတဆတ်ဆတ်လှုပ်ခြင်း
အခြားသူပြောသည့် စကားကို လိုက်ပြောခြင်း
အကြောလိုက်ခြင်းသည် ရိုးရိုးနှင့် ရှုပ်ထွေးသောပုံစံ ဟူ၍ ရှိသည်။ ရိုးရိုးအကြောလိုက်ခြင်းသည် မျက်တောင်ခတ်ခြင်း၊ မျက်နှာရှုံ့ခြင်းတို့ကဲ့သို့ ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်သာ ပါဝင်သည်။
ရှုပ်ထွေးသောအကြောလိုက်ခြင်းသည် ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအများအပြားနှင့် စကားပြောခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဥပမာ ခုန်ခြင်း၊ ဆဲရေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
သင့်ကလေးတွင် သူ့အလိုလိုဖြစ်နေသော လှုပ်ရှားမှုများ/အသံများ တွေ့လာရလျှင် ကလေးဆရာဝန်နှင့် ပြပါ။
အကြောလိုက်ခြင်းအားလုံး Tourette’s Syndrome မဟုတ်ပါ။ ကလေးအများစုတွင် ဖြစ်သော အကြောလိုက်ခြင်းသည် ရက်သတ္တပတ်/လ အနည်းငယ်အတွင်း အလိုလိုပျောက်သွားတတ်သည်။ သို့သော် ကလေးတွင် မူမမှန်သော အမူအရာတွေ့ရတိုင်း အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေ၍ ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေးပြဿနာမရှိကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ရမည်။
Tourette Syndrome (အကြောလိုက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Tourette’s Syndrome ၏ တိကျသော အကြောင်းရင်းကို မသိရပါ။ မျိုးရိုးဗီဇ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတို့ ပေါင်းဆုံရာမှ ဖြစ်လာသော ရောဂါအခြေအနေ ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်ထဲရှိ အာရုံကြောသတင်းပို့မှုကို ပြုလုပ်သော ဓါတုပစ္စည်းများဖြစ်သည့် dopamine and serotonin တို့နှင့်ပတ်သတ်နိုင်သည်။
မိသားစုရောဂါရာဇဝင်။ မိသားစုထဲတွင် Tourette’s Syndrome သို့မဟုတ် အခြားအကြောလိုက်သည့် ပြဿနာရှိသူများ
ယောကျာ်းလေး၊မိန်းကလေးကွာခြားချက်။ ယောကျာ်းလေးများတွင် Tourette’s Syndrome ဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးလေးဆ ပိုများသည်။
Tourette Syndrome (အကြောလိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Tourette’s Syndrome အတွက် သီးသန့်စစ်ဆေးမှုဟူ၍ မရှိပါ။ ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်သည့်အပေါ် မူတည်၍ သိနိုင်သည်။ ရောဂါအမည်တပ်ရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များမှာ
တစ်ချိန်တည်းတွင် အတူဖြစ်ရန်မလိုသော်လည်း လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရော အသံနှင့်ပါဆိုင်သည့် လက္ခဏာများ ရှိရမည်။
တနေ့လျှင် သုံးလေးကြိမ်၊ နေ့စဉ်နီးပါး သို့မဟုတ် ရက်ခြားကို တစ်နှစ်ကျော်ကျော် ဖြစ်ရမည်။
အကြောလိုက်ခြင်းသည် အသက် ၁၈နှစ် မတိုင်ခင် စဖြစ်သည်။
ဆေးများ၊ အခြားအရာများ၊ အခြားရောဂါများကြောင့် မဖြစ်ရပါ။
Tourette’s Syndrome ၏ လက္ခဏာများသည် အခြားရောဂါများနှင့် တူနေသောကြောင့် ထိုရောဂါဖြစ်ကြောင်း မသိလိုက်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။ မျက်တောင်ခတ်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် တွဲနိုင်ပြီး နှာရှုံ့ခြင်းသည် ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့်တွဲနိုင်သည်။
လှုပ်ရှားမှု/အသံတို့နှင့် ပတ်သတ်သော အကြောလိုက်ခြင်းသည် Tourette’s Syndrome မဟုတ်သည့် အခြားအကြောင်းများ ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းများကို သိနိုင်ရန် ဆရာဝန်က သွေးစစ်ခြင်း၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Tourette Syndrome (အကြောလိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Tourette’s Syndrome အတွက် ပျောက်စေနိုင်သည့် ကုသမှု မရှိပါ။ နေ့စဉ်ဘဝကို ထိခိုက်စေမည့် အကြောလိုက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကုသသည်။ အကြောလိုက်ခြင်းများသည် မပြင်းထန်သော်လည်း ကုသမှုလိုအပ်နိုင်သည်။
အကြောလိုက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် ဆေးဝါးများ
Dopamine ကို နည်းစေသည့် ဆေးများ
Fluphenazine, haloperidol (Haldol) and pimozide (Orap) တို့သည် အကြောလိုက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများစသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော စိတ်ကျခြင်းဖြစ်စေတတ်သည့် . Tetrabenazine ကိုလည်း သုံးနိင်သည်။
Botulinum (Botox) ထိုးခြင်း
အကြောလိုက်သော ကြွက်သားထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးခြင်းဖြင့် ရိုးရိုးအကြောလိုက်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။
ADHD အတွက်သုံးသော ဆေးများ
methylphenidate ကဲ့သို့လှုံ့ဆော်ဆေးများနှင့်ိdextroamphetamine ပါသောဆေးများသည် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကူညီပေးသည်။ သို့သော် Tourette’s Syndrome ရောဂါသည်များတွင် အကြောလိုက်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေသည်။
ဗဟို adrenergic အာရုံကြောစနစ် ထိန်းချုပ်ဆေးများ
(Catapres) and guanfacine (Tenex) တို့ကဲ့သို့ သွေးပေါင်တက်ခြင်းအတွက် သုံးသောဆေးများသည် ထိန်းချုပ်ရခက်သောလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဒေါသူပုန်ထခြင်း စသည့် အပြုအမူဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနှင့် အိပ်ငိုက်စေတတ်သည်။
ဝမ်းနည်းခြင်း၊ စိုးရိမ်သောကနှင့် စိတ်စွဲလမ်းလွန်ခြင်းတို့အတွက် သုံးနိုင်သည်။
လတ်တလောလေ့လာမှုများအရ Tourette syndrome သည် အတက်ရောဂါအတွက်သုံးသော topiramate (Topamax) ဆေးဖြင့်ကုသမှုကို တုန့်ပြန်မှုရှိသည် ဟုဆိုသည်။
အပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးများ။ အပြုအမူကို သိမြင်သည့် ကုထုံးအနေဖြင့် ပြောင်းပြန်လေ့ကျင့်မှုသည် အကြောလိုက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်၍ ရှေ့ပြေးစိတ်ခံစားမှုများကို သိရှိပြီး အကြောမလိုက်စေရန် တမင်တကာပြုသည့် လှုပ်ရှားမှုကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး။ Tourette syndrome ကို ရင်ဆိုင်ရန်ကူညီသည့်အပြင် တွဲလျက်ဖြစ်တတ်သည့် ADHD စိတ်စွဲလန်းခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်သောကတို့ကိုလည်း သက်သာစေသည်။
DBS အခြားကုသမှုများကို မတုန့်ပြန်သော ပြင်းထန်သည့် အကြောလိုက်ခြင်းတွင် သုံးသည်။ ဦးနှောက်ထဲတွင် ဘက်ထရီသုံးသော စက်ပစ္စည်းကလေးထည့်ထားပြီး လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်သောနေရာများသို့ လှုံ့ဆော်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောလိုက်ခြင်းသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အစောပိုင်းတွင် အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး အသက်ကြီးလာလျှင် သက်သာလာမည်ကို သိထားပါ။ေ
ရောဂါတူသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး နေထိုင်မှုနည်းလမ်းများ၊ အကူအညီများရယူပါ။
ကျောင်းတက်ခြင်းသည် Tourette syndrome ရှိသည့်ကလေးများအတွက် အထူးစိန်ခေါ်မှုကြီး ဖြစ်သည်။ ကလေးကိုကူညီရန်
ကလေး၏ရှေ့မှ ရပ်တည်ပါ။ ကျောင်းမှဆရာများ၊ ကျောင်းကားမောင်းသူများနှင့် ကလေးနှင့် နေ့စဉ်တွေ့ရမည့် အခြားလူများကို Tourette syndrome အကြောင်းပညာပေးပါ။ ကလေး၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမည့် အနီးကပ်သင်ပြခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန် အချိန်မသတ်မှတ်သည့် စာမေးပွဲများ၊ လူနည်းသည့် စာသင်ခန်းများ စသည်တို့ကို စီစဉ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။
ကလေး၏ စိတ်ဝင်စားသည့်အရာများ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနှင့်ဆက်ဆံရေးကို အားပေးခြင်းဖြင့် ကလေးအား မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးပါ။
ရောဂါနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကူညီမည့် ွှသကမနအအန္လျ ျပညိမသာန ကူညီထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းကို သင့်အနီးအနားတွင် ရှာဖွေပါ။ မရှိသေးလျှင် တည်ထောင်ရန် စဉ်းစားပါ။
1. Tourette’s syndrome.
http://www.webmd.com/brain/tourettes-syndrome#1-1. Accessed 29 Dec, 2016.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tourette-syndrome/home/ovc-20163623. Accessed 29 Dec 2016.